Nezvedu - Shenzhen Everycom Technology Co, Ltd.
Screenless TV, hombe yakakura size, Kudzivirirwa kwezvakatarisana mwenje mwenje etc. Touyinger ari munzira yekuve piyona uyo unotungamira mararamiro ane hutano uye maitiro matsva enguva. KwaTouyinger, Isu takazvipira kuve kambani yakanakisa iyo inogona kuunza yepamusoro-mhando purojekiti uye zvishandiso kune vatengi vanobva kumativi ese enyika. Kuvaka vega Imba yemitambo yemitambo uye kugadzira hupenyu hune hutano hwemhuri yese. Isu tichaita iyo inodhura-inobhadhara bhajeti kwauri uye ita zvese zvatinogona kuti tipe netaipi riri nani, rakawanda ruzivo, rakanyanya kuwedzeredza basa. Pane zvimwe zvinhu Mari Haigoni Kutenga. Kwemhuri, Kune Touyinger Service.
ShenZhen Everycom Technology Limited Kambani, tarisa kune maProjekita anopfuura makore manomwe. Kukurudzira Hutano Hupenyu Mararamiro, Kuti uve Wako Pamba Pamba Reatari. Professional, Yemunharaunda, Service uye Hunhu inoita kuti tikure zvakanaka uye zviri nani.
· Kurume, 2013, ShenZhen Everycom Technology Limited Kambani, set up,
· Kubvumbi, 2014, Takanyoresa "Allcom" Brand,
· Chivabvu, 2016, Kukwirisa guta rakanyoreswa, Akanyoreswa mhiri kweNzvimbo Trademark "Touyinger", Uye isu tine mushandirapamwe neXGIMI, JMGO Projector kutengesa yakakwirira DLP Projector. Kutengesa kwedu kwegore rimwe kupfuura USD2000000.
· Chikumi, 2017, Akavhura 2 Service Center muRussian Federation, Tine zvinhu muRussia Federation.
· Nyamavhuvhu, 2017, Aliexpress "Allcom Projectors" kusimudzira ku "Touyinger Offical Chitoro", "Touyinger" Iva Aliexpress Yepamusoro Brand, Kutengesa kwedu kwegore rimwe kupfuura USD4000000
· Ndira, 2018, "Touyinger" Trademark yakauya kuzoshanda muRussian Federation, USA, South Korea, India, EU etc. "Touyinger" ari kutarisira kusarudzika. Kutengesa kwedu kwegore rimwe kupfuura USD5000000.
· Kurume, 2019, isu takavhura mamwe webasa nzvimbo uye yekuchengetera muRussia, Europe, uye Brazil, Uye kuva nezvinhu muSouth Korea kukurudzira kwenzvimbo. isu vanopedzera kubatana neXGIMI, JMGO, Mi, Optoma, ViewSonic High Rank DLP uye Laser Projector. Kutengesa kwedu kwegore negore kupfuura USD7000000.
· Chikumi, 2020, Kutanga kusimudzira ChiQ Brand Projector .......